साँच्चै ओमिक्रोन भेरियन्टसँगै महामारी समाप्त हुँदैछ? – Nep Stok
माघ ११, २०७८ मंगलबार 100
युरोपमा कोभिड-१९ महामारीको अन्तिम भेरियन्ट ओमिक्रोन नै हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले बताएको छ। ओमिक्रोनले विश्व कोभिड महामारीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएकाले यो नै अन्तिम भेरियन्ट हुन सक्ने डब्ल्युएचओले बताएको हो।
डब्ल्युएचओ युरोपका निर्देशक ह्यान्स क्लजले सो बताएका हुन्। ‘कोभिड महामारी सुरु भएको तीन वर्ष हुन लागि सक्यो। त्यसैले ओमिक्रोन भेरियन्ट नै यस महामारीको अन्तिम रुप हुन सक्छ,’ आगामी मार्च सम्म ६० प्रतिशत युरोपियन ओमिक्रो संक्रमित हुने बताउँदै उनले भनेका छन्।
ओमिक्रोन भेरियन्टले चरम रुप लिएको युरोपमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या ओरालो लाग्दै गएको बताइएको छ। कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका कारण पनि ओमिक्रोनले कम असर गरेको र चाडै महामारीको अन्त्य हुने संकेत देखा परेको उनले बताएका हुन्।
Prevनेपालमा एउटा प्रहरीको कुकुरले पनि पत्ता लगाउन नसकेको यो घट्ना !
Nextबिहानैदेखि मौसम खराब, आगामी तीन दिनको मौसम यस्तो छ, जान्नुहोस
ललितपुरको पाटनमा ढल खन्दा अंशुवर्माको पालाको शिलालेख भेटियो